प्रभु इन्स्योरेन्सको कुल बीमा शुल्क आर्जन २९ करोड, नाफा कति ? – Insurance Khabar
प्रभु इन्स्योरेन्सको कुल बीमा शुल्क आर्जन २९ करोड, नाफा कति ?
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७६, आईतवार १७:००
काठमाडौँ । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । चालु आवको प्रथम त्रैमासको अवधिमा कम्पनीले २९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले २७ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्रथम त्रैमासको अवधिमा कम्पनीले १६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन रकम घटेको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा कम्पनीले ४ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अपवधिको तुलनामा कम्पनीको खुद मुनाफामा ३५ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
प्रभु इन्स्योरेन्सले प्रथम त्रैमासको अवधिमा १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ कुल दावी भुक्तानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कुल दावी भुक्तानी गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो ८ प्रतिशतले कमि हो ।
एक अर्ब ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको प्रभु इन्स्योरेन्सको जगेडा कोषमा २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, इन्स्योरेन्सको बीमा कोषमा ५८ करोड ६१ लख रुपैयाँ संचिति छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासको अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्सले १८ हजार ८ सय ७१ वटा बीमालेख जारी गरेको छ । भुक्तानी हुन बाँकी दावी रकम १५ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । इन्स्योरेन्सको प्रति शेयर आम्दानी ४ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, प्रतिशेयर नेटवर्थ १८५ रुपैयाँ रहेको छ ।